Galmudug oo eedday ku hoos noolaanshaha Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo eedday ku hoos noolaanshaha Farmaajo
Dadka shacabka ah ayaa rumeysan in ASWJ u dagaalamaysay fikir diimeed, Maleeshiyaadka degaanka sida Macawiisleyna u dagaamayeen hab nololeedkooda & hantidooda, halka ciidamada dawladdu u dagaalamaan Farmaajo dartiis, (AMARADIISA) taas oo meesha ka saartay dagaal dhab ah oo la mid ah midkii kooxha kore oo lala galo Al-Shabaab.
GALMUDUG – Amniga gobollada Mudug iyo Galgaduud, ayaa faraha ka baxay, tan iyo marki meesha laga saaray nidaamkii Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf), isla-markaana la cirib-tiray Urur-kii Ahlu-sunna Waljamaacah iyo Kooxihii Macawislay ee degaannada maamulkaas muddada dheer ka hor taagnaa Kooxda Al-Shabaab.
Dhamaadkii 2008, kacdoonkii hubeysnaa ee Culumada Suufiyada, ee ku sugnaa Dhuusamareeb iyo Guriceel, ayaa horseeday in si weyn loogu baraarugu, la dagaallanka Al-Shabaab, taas oo sababtay in ay gobollo badan iska abaabulaan kooxo la baxay magaca macawislay oo degaanno kala duwan kula dagaallamay Al-Shabaab.
Ahlu-sunna oo u dagaalameysay dariiqo diimeed iyo Macawisley oo u dirireysay difaaca xoolahooda, ayaa Al-Shabaab muddo 10 sano ka badan ka hor taagnaa inta badan degaannada Galmudug, hayeeshee, markii guud ahaan maamulka labada gobol la hoos geeyay Dowladda Farmaajo billowgii 2020, waxaa Al-Shabaab u suura gashay ka talinta degaanno aysan waligiid ku riyoon.
Waxa qarka u saaran in ay gacanta Al-Shabaab galaan degmooyin muhiim ah oo ay ku jirto Xarunta Maamulka ee Dhuusamareeb, oo hadaba ku jirta go’doon dhanka socdaalka dhuka ah, waxaa laga cabsi qabaa, weerarro ka dhanka ah magaalada xeebeedka Hobyo.
Howlgalladii labadii bilood ee la soo dhaafay ka socday Mudug, waxa ay caddeeyeen in Maamulka Galmudug uu yahay maamulka taageerada ugu yare ee dhanka amniga ah ka hela dowladda dhexe, kadib markii Kooxda Farmaajo ku fashilmeen in ay gacan ka geysato dagaallada ka curtay dareenka bulshada.
Billowgii todobaadkaan, Kooxda Al-Shabaab, waxa ay isku dayeen in ay galaan degaanka Baxdo oo dhacda Galgaduud, waxaase, mar kale la dareemay kacdoonka Culumadii Ahlu-sunna, taas oo Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ku qasabtay in ay ka fogaadaan Baxdo oo ah degaan ay ku badan yihiin Suufiyada.
Farmaajo, wuxuu gobolka Gedo ku daad gureynayay askar iyo dabbaabaad ciidan si ay Axmed Madoobe, uga saaraan gobolkaas, halka uu Mudug u diray Biixi oo ay isku heyb yihiin si uu u fashiloyo dagaalka Galmudug una han-jabsho shacabka iskiis isku xilqaamay.